Inganekwane ye-Creepiest Urban e-States ngayinye kweziyi-50 Ingxenye 10
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Inganekwane ye-Creepiest Urban e-States ngayinye kweziyi-50 Ingxenye 10
by Waylon Jordan January 18, 2021 3,757 ukubukwa
Ngabe sesifinyelele impela ekugcineni kohambo lwethu lwenganekwane yasemadolobheni nge-US?! Ngicabanga ukuthi sinakho. Cishe kunzima ukukukholelwa, kepha nakhu sikhuluma nezifundazwe ezinhlanu zokugcina ku-travelogue yethu eshubile futhi ngithemba ukuthi ukujabulele ukuzifunda njengoba nginakho engikubhalayo ngazo.
Manje, ngoba yisahluko sokugcina kulolu hambo, ungalahli ithemba! Lezi zinhlanu zokugcina zinhle njengeyokuqala, futhi ngenkathi singaphandle kwezifundazwe, ngeke wazi ukuthi singalandela kuphi!
Iyiphi inganekwane yakho oyithandayo yasemadolobheni yasikhathi sonke? Sazise kumazwana abekiwe!
Isithombe nge Flickr
Ngilinde isikhathi eside ukufika eVirginia ukuze ngikwazi ukukhuluma ngeBunnyman. Indaba iyangijabulisa impela. Kuyinganekwane yangempela yasemadolobheni, ezalelwa ezigamekweni ezimbili ngonyaka we-1970, ethathe impilo yayo futhi yabakhuthaza ababalisi bezindaba, abenzi bamafilimu, abaculi, nabaculi ngokufanayo.
Yilapho kwaqala khona eBurke, eVirginia:
Ngo-Okthoba 19, 1970, i-Air Force Academy Cadet uRobert Bennett nengoduso yakhe babehleli emotweni emile lapho indoda eyayigqoke isudu emhlophe kanogada yaphuma egijima ezihlahleni ngesigqoko ibamemeza laba bobabili, “Niyedwa futhi nginenombolo yethegi yakho! ”
Lo mlisa uqhubekile waphonsa isigqoko semoto emotweni, esingene ngefasitela sayongena esitezi esingezansi ngesikhathi uBennett edlikiza eshayela. Le ndoda imemeze ngesikhathi ibaphunyula ngaphambi kokuba yeqe ibuyele ehlathini.
Ezinsukwini eziyishumi kamuva ngo-Okthoba 29, uPaul Phillips, unogada wokwakha, wathola owesilisa ogqoke isudi kanogwaja emnyama, emnyama nomhlophe. UPhillips wambuka kangcono umhlaseli, wamchaza eneminyaka engaba ngu-20 ubudala, u-5'8 ″ no-chubby kancane. Le ndoda yaqala ukushaya izembe evarandeni ikhala ithi, “Uyangena. Uma ungasondela, ngizokunquma ikhanda. ”
Amaphoyisa aseFairfax County avule uphenyo ngalezi zigameko, zombili ezagcina zivaliwe ngenxa yokushoda kobufakazi.
Kwakwanele nje ukuvusa imicabango yabantu bendawo, noma kunjalo.
Okwenzekile ngokulandelayo yinganekwane yasemadolobheni yegolide. Ngokushesha izindaba zaqala ukukhula mayelana noBunnyman ongaqondakali nemvelaphi yakhe kanye nezisusa zakhe.
Enye yezindaba ezinje ibuyela emuva emuva ngonyaka we-1904 lapho iziguli ezimbili eziphunyukile zibalekela ehlathini eliseduze nale ndawo. Ngokushesha abantu bendawo bathola izidumbu zikanogwaja ezinesikhumba, ezingadliw. Ekugcineni, omunye wabo watholakala elenga eFairfax Station Bridge ephethe umgqomo ongahluziwe, owenziwe ngezandla ngesigqoko futhi iziphathimandla zacabanga ukuthi izehlakalo ezingaziwa seziphelile. Kodwa-ke, njengoba izidumbu eziningi zonogwaja zitholakala, ngokushesha kwacaca ukuthi omunye ophunyukile wayesalulaza.
Manje, bathi, uBunnyman usayihlupha le ndawo, esabisa abantu bendawo futhi elenga izisulu zakhe ebhulohweni elilodwa njengoba iHalloween isondela. Vele, abukho ubufakazi balokhu obutholakele, kepha lokho akuvimbi abazali ekuxwayiseni izingane zabo ukuthi ziqaphele ngeHalloween hleze babe yizisulu kuBunnyman.
Lokhu kumane nje kungukunye kwezinganekwane eziqubuke ezungeze isigelekeqe esidumile, futhi kuyangijabulisa ukuthi konke kubukeka sengathi kukhule ezigamekweni ezimbili ngeminyaka yama-1970 yindoda ebibukeka icasukile ngokwakhiwa kwamakhelwane asedolobheni endaweni.
Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngeBunnyman, ngincoma kakhulu isihloko sikaJenny Cutler Lopez esithi "Phila Isikhathi eside uBunnyman" INorth Virginia Magazine kusuka ngo-2015. Imboza ngezehlakalo zokuqala kepha ibuye ingene endleleni okhule ngayo ezungeze iBunnyman.
IWashington: Amehlo Akhazimulayo eMariner High School
Image by yhiae ahmad kusukela Pixabay
IMariner High School e-Everett, eWashington ifana nanoma yisiphi esinye isikole esiphakeme ezweni ngaphandle kwemininingwane eyodwa. Ngenkathi ezinye izibani zesikole zisale zikhanyiswa ubusuku bonke njengezinye, ngobusuku obuthile phakathi kwamabili, izibani zizocisha zifake inkundla ebumnyameni.
Uma lokhu kwenzeka, abanye abantu bendawo bathi, ungabona amehlo amabili akhanyayo ekhanya ebumnyameni besikole. Ngaphezu kwalokho, bathi uma ugqolozela amehlo ngokwanele, uzoqala ukubona umfanekiso wendoda enamaphiko ngaphakathi esikoleni.
Ingabe lena yimascot engavumelekile, engaphezu kwemvelo? Ngabe umfowabo omncane kaMothman uya emakilasini asebusuku? Akekho onesiqiniseko, kepha bathi ungezwa amehlo ekubuka ngaphambi kokuthi uwabone, futhi ukuthi kukwenza kube uhlobo olufanele nje kuphela lokweqa lolu hlu.
I-West Virginia: Abafundi Abangenakhanda baseMonalia County
Le nganekwane yasemadolobheni ingenye eyadonsela impilo ecaleni elibuhlungu nelangempela lokubulawa kwabantu ngoJanuwari, 1970. Ababili abasebenzisana nabo, uMared Malerik noKaren Ferrell, babezama ukugibela umgibeli ngemuva kokushiya ama-movie ngalobo busuku bukaJanuwari. Abazange baphinde babonwe kuze kutholakale izidumbu zabo ezazinqunywe amakhanda ehlathini ngemuva kwezinyanga.
Abantu bendawo bashaqeka ngokufanelekile ngaleli cala, futhi ngemuva kweminyaka emihlanu alizange lisaxazululwe kuze kube yilapho indoda egama lingu-Eugene Clawson ivuma icala lokubulala. Nansi into, noma kunjalo. Ngenkathi uClawson ngokungangabazeki wayengumuntu omubi – waphinde watholwa enecala lokudlwengula intombazane eneminyaka engu-14 – abantu abaningi babengacabangi ukuthi unecala lokubulawa kwalaba besifazane abasebasha okukhulunywa ngabo.
Leli cala bekuyindaba yama-podcast, uphenyo nezincwadi selokhu uClawson aboshwa futhi wagwetshwa, futhi cishe akekho noyedwa ocabanga ukuthi ubenzile ngempela lobu bugebengu.
Manje ngubani owenzile? Kubo bonke abaphenyi, kukhona umsolwa ohlukile, futhi kunzima ukusho.
Esikwaziyo ukuthi kusukela ngaleso sikhathi, amahemuhemu nemibiko yokubukwa kwabesifazane ababili abangenakhanda kwaqhamuka ngasemgwaqweni lapho kwagcina ukubonwa khona uMared noKaren. Empeleni, kusolwe ingozi engaphezulu kweyodwa yemoto kubaphazamisi abashayeli bezimoto.
Ngabe le mimoya ibuyisa izikhathi zayo zokugcina noma inganekwane yasemadolobheni ehlelwe yinhlekelele yokuxwayisa abantu abasha ngobungozi bokuhamba ngezinyawo?
IWisconsin: I-Phantom yaseRidgeway aka The Ridgeway Ghost
Image by lea ithemba bonzer kusukela Pixabay
Umgwaqo ongeyedwa eduze kwaseDodgeville, eWisconsin uyikhaya le-phantom elesabekayo okuthiwa umoya ohlangene wabazalwane ababili abashona ku-bar brawl ngawo-1840.
Kusukela ngaleso sikhathi, okuthiwa kumjikelezo weminyaka engama-40, i-phantom iyabuya. Okukhathaza kakhulu ngale nganekwane yasemadolobheni, kodwa-ke, yisimo somoya esiguqukayo. Ngezikhathi ezahlukahlukene, iRidgeway Ghost ibhekwe njengezilwane ezinjengezinja nezingulube kanye nokuthatha isimo samadoda nabesifazane ngisho namabhola amakhulu omlilo. Okungenani umbiko owodwa uze wafaka nomgibeli wehhashi ongenakhanda.
Abanye abantu bakule ndawo babiza ukubona kwe-phantom ngomsebenzi wama-pranksters, kepha labo abaye bazibonela mathupha le nto bazokutshela ngenye indlela.
I-Wyoming: Umkhumbi Wokufa eMfuleni iNorth Platte
Image by i-enzol kusukela Pixabay
Ngingu-sucker we-a umkhumbi omuhle indaba…
Kusukela ngawo-1860, kuye kwabikwa ngomkhumbi oyindida ongaqondakali eceleni koMfula iNorth Platte eWyoming. Kubonakala ebhange lenkungu phakathi nosuku – lapho izinto ezinjena ngokujwayelekile bezingeke zibe khona – futhi zisondela emathunzini, zimbozwe yiqhwa ngabasebenzi abayizipoki emiphemeni yalo.
Okuthusa kakhulu ngalo mkhumbi ukuthi kubikwa ukuthi uvele ngaphambi nje kokuba umuntu afe. Ngaphezu kwalokho, bathi empeleni uzobona ukubonakala komuntu obezofela emphemeni womkhumbi, embozwe yiqhwa njengabo bonke abanye abasebenzi.
Kunezindaba eziningi mayelana noMkhumbi Wokufa, kepha ngizokwabelana ngalokhu okurekhodwe ku-Only In Your State:
Eminyakeni engaphezu kwengu-100 eyedlule, umgibeli ogama lakhe linguLeon Webber wabika ukuhlangana kwakhe nomkhumbi we-spectral. Ekuqaleni, konke akubona kwakuyibhola elikhulu lenkungu. Uphuthume onqenqemeni lomfula ukuze abukisise futhi waphonsa itshe ebunzimeni obuzungezayo. Ngokushesha yathatha isimo somkhumbi ohamba ngomkhumbi, imasti yensimbi namaseyili embozwe ngosilika, iqhwa elikhazimulayo.
UWebber wayebona amatilosi amaningana, nawo embozwe yiqhwa, aminyene entweni elele emphemeni womkhumbi. Lapho bephuma bemnika umbono ocacile, wamangala lapho ebona ukuthi yisidumbu sentombazane ababekade beyibuka. Ebheka eduze, lo trapper wambona njengesoka lakhe. Cabanga ukwethuka kwakhe lapho ebuyela ekhaya ngemuva kwenyanga ezwa ukuthi othandekayo wakhe ushonile ngalolo suku abone ngalo ukubonakala kwesabekayo.
Ukuthola okuningi kwalezi zindaba kusuka, CHOFOZA LAPHA.
Kulungile… yilokho-ke. Simboze inganekwane yami engiyithandayo esesidolobheni evela kuzo zonke izifunda ezingama-50 e-US Ngabe ubenentandokazi? Ngabe bakhona abanye obungabakhetha? Sazise ukuthi ucabangani ngezansi!